Sunday March 13, 2022 - 19:24:05 in Wararka by Xarunta Dhexe
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa xaqiijiyay in iska horimaad toos ah oo dhexmara gaashaanbuurta NATO iyo Ruushka uu ka dhalan doono dagaalkii saddexaad ee adduunka. "Waxaan rabaa in aan caddeeyo: Waxaan ilaalin doonaa gobol kasta oo NAT
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa xaqiijiyay in iska horimaad toos ah oo dhexmara gaashaanbuurta NATO iyo Ruushka uu ka dhalan doono dagaalkii saddexaad ee adduunka. "Waxaan rabaa in aan caddeeyo: Waxaan ilaalin doonaa gobol kasta oo NATO ah in uu lahaado leh awood buuxda oo isku dhafan oo la xoojiyay" ayuu yiri Biden.
"Laakiin ma qaadi doono dagaal ka dhan ah Ruushka oo duulaan ku qaaday Ukraine, iska horimaad kasta oo toos ah oo dhexmara NATO iyo Ruushka wuxuu noqon karaa dagaalkii 3-aad ee aduunka"
Biden ayaa marar badan diiday inuu u diro ciidamo Maraykan ah si ay isaga hor imaad toos ah ula galaan ciidamada Ruushka.
Maalmihii la soo dhaafay, maamulkiisa ayaa bilaabay olole cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Vladimir Putin iyo dalkiisa.
Jimcihii Biden, wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa uu mamnuucayo badeecadihii uga imaan jiray Ruushka sida khamriga Vodka, dheemanka iyo cuntada badda.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay inuu xadidi doono dhoofinta alaabaha raaxada ee Mareykanka ee uu geyn jiray Ruushka. Alaabooyinka aanan laga heli doonin suuqyada Ruushka waxaa kamid ah saacadaha, baabuurta iyo dahabka.
Sidaas si la mid ah, Maraykanka iyo xulafadiisa waxay isku dayi doonaan inay wiiqaan maqaamka Ruushka gaar ahaan awooddiisa ganacsi.
"Putin waa nin gadaran, wuxuu dusha saaran doonaa mas'uuliyadda ka dhalata arrintaas, Waan muujineynaa awoodeena, mana quusan doono," ayuu hadalkiisa raaciyay.
'Toos aan u wada hadalno' - Putin oo u jawaabay Biden
Wada hadalka Biden iyo Putin: "Waan ogahay in Ruushku isku dayay faragelinta doorashadii 2020"
Khamriga Vodka ee Ruushka
Maxay ka dhigan tahay in Ruushku aanu ahayn saaxib ganacsi oo la door bidayo?
Sida laga soo xigtay Biden, isbeddelladan ayaa u oggolaanaya Waqooyiga Ameerika inay soo rogaan canshuuro cusub oo ku saabsan badeecado badan oo ka imaanayo Ruushka, taas oo si toos ah u saameyn doonta dhaqaalaha Rushka oo horay u saameeyay cunaqabateynta reer galbeedka.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in cunaqabateyntan ay Ruushka ku riixi doonto hoos u dhac ku yimaado dhaqaalahiisa sanadkan.
Ukraine iyo Canada ayaa horey u soo saaray go'aano kuwan la mid ah oo ka dhan ah xukuumadda Moscow. Midowga Yurub, G7 iyo xulafada ururka NATO ee Waqooyiga Atlantic ayaa sidoo kale la filayaa inay ku biiraan.
Madaxweynaha Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay in uu dalalka G7 uu kala shaqeyn doono sidii Ruushka looga xiri lahaa ilaha dhaqaalaha ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF.
Digniinta uu u diray Putin
Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin
Biden ayaa sidoo kale uga digay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu cawaaqib xumo kala kulmi doono haddii uu isticmaalo hubka kimikada xilli uu duulaan ku qaaday Ukraine.
Hadalka Maraykanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo Jimcihii lasoo dhaafay la sheegay in ciidamada xukuumadda Moscow ay xoojiyeen weerarrada ay ku qaadayaan galbeedka Ukraine, iyagoo weerarro bambaanooyin ah ku qaaday magaalooyinka Lutsk iyo Ivano-Frankivsk, oo ku yaalla xadka Poland iyo Moldova.
Poland waa xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO.
Ruushka ayaa qaaday tallaabo uu uga jawaabayo cunaqabateynta ay waddamada Galbeedka ku soo rogeen kadib markii uu ku duulay dalka Ukraine.
Xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in 48 waddan oo ay ku tilmaantay "kuwo galay falal saaxiibtinnimada ka baxsan" ay ka mamnuucday qalabka isgaarsiinta, caafimaadka, gaadiidka, beeraha iyo korontada ee uu dalkeeda u dhoofiyo. Xayiraadda ayaa socon doonta tan iyo dhammaadka 2022.
Dowladaha Galbeedka ayaa Ruushka saaray cunaqabateyn xooggeedu yahay joojinta iibsiga shidaalka iyo gaaska dalkaas, iyo xayiraadda hantida maalqabeennada waddankaas ee loo arko inay xiriir dhaw la leeyihiin Madaxweyne Vladimir Putin.
Ruushka ayaa balaariyay weerarada uu ku hayo Ukraine, isagoo weeraray magaalooyinka Lutsk, Ivano-Frankivsk iyo Dnipro.
Maamulka magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine ee muddada dheer go'doonka ku jirtay ayaa sheegay in in ka badan 1500 oo qof oo rayid ah lagu dilay 12 maalmood oo duqeymo ay geysanyeen ciidamada Ruushka.
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xaaladda magaalada ku tilmaantay mid halis ah; waxa ay ku eedaysay Ruushka in uu hor istaagay isku dayo lagu doonayay in lagu gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo.
Magaalada kale ee istaraatiijiga ah ee koonfurta Mykolaiv, ayaa waxaa duqeynaya ciidamada Ruushka.